China Nonstick pan Cold ibe ya bụrụ hydraulic pịa Manufacture na Factory | Ekechukwu
Nonstick pan Oyi ibe ya bụrụ hydraulic pịa
5000T oyi na-agbazi hydraulic pịa, a na-ejikarị ya maka ite okpuru, ite na-abụghị osisi. Na nrụgide, pịa ọla abụọ ọnụ. Ite okpukpu abụọ na-akpọtụrụ mkpuchi isi iyi ọkụ ma na-enyefe ọkụ ọkụ ngwa ngwa, nke nwere ike ime ka edo na nkesa ọkụ dị n'otu. Ngwurugwu dị n'ime ite ahụ dị mma, na-eguzogide ọgwụ, ọ dịghị mfe nchara, ọ gaghị emepụta ogige na-emerụ ahụ ike mmadụ
Ngwa na Branddị
1. Eku bụ welded etiti Ọdịdị, ike ọnọdụ ezi uche, imewe nchekwa na-akpata bụ elu, na ọrụ ndụ nwere ike iru ihe karịrị afọ 15.
2. N'okpuru ibu zuru oke, nrụrụ okpokoro bụ naanị 0. 5 ~ 1mm / m, na-eme ka nhichapụ nkenke dị elu.
3. The isi cylinder adopts mba elu mgbochi leakage ọtụtụ ihe mejupụtara akara technology na metal mgbasa mgbanaka akara technology, nke nwere ike ukwuu melite pụrụ ịdabere na ndụ nke cylinder akara.
4. Sịlịnda nọchiri anya teknụzụ bimetal ịgbado ọkụ mejupụtara, nke na-eme ka njigide akwa na ndụ a tụkwasịrị obi nke cylinder ahụ, ndụ ọrụ ahụ nwere ike iru karịa oge 30,000,000.
5. Ngwa-ngwa-ngwa-ngwa-ngwa-ngwa-ahia nwere ike igha enweta ike na ida osiso, melite oru oma ma chekwaa ume.
6. Usoro mmiri mgbapụta na-agwakọta ngwa ngwa ngwa ngwa nke usoro ngwa ọrụ nke servo moto na njide onwe onye na-achịkwa njigide mmanụ nke mmanụ ụgbọ mmiri, nke na-eweta nnukwu ikike ịchekwa ike, na ọnụego nchekwa ike nwere ike iru ihe ruru 30% -80%.
Elu ọnụ ike
Nrụ ọrụ ọrụ nke hydraulics, Mpa
Pịa efere ihe
Main sịlịnda qty
Jectiongba Cylinder Force
Jectiongba Ejection 0 ~ 350mm
Oke ọsọ efere eweli
200mm / nkeji
Efere mmechi ọsọ
200 mm / nkeji
Efere na-arụ ọrụ ọsọ
4.8-19mm / nkeji
Machine Igwe akụrụngwa nke hydraulic arụpụtala ụdị ụdị ọhụhụ ma bụrụ nke igwe dị na usoro njikwa. Akụrụngwa ahụ nwere etiti, usoro eletriki, sistemụ hydraulic.
A-mechanism Usoro njikwa nwere usoro hydraulic, usoro nchịkwa eletriki, ngwaọrụ na-egbochi ọrịa strok, pipeline, igbe nchịkwa eletrik na akụkụ ndị ọzọ inyeaka. Ejikọtara usoro eletriki na ọdụ ụgbọ mmiri dị na otu site na ọkpọkọ mmanụ na wired ndị na-eduga iji ghọta usoro nke omume niile.
● Isi slide bụ # 45 ígwè dum efere. Efere ala nke slide bụ efere ígwè dum na-eme ka nrụgide na ike zuru ezu. Nduzi nke slide ahụ bụ sideling wedge na akụkụ anọ ya na esemokwu asatọ na-eduzi ụgbọ okporo ígwè, nke na-enye nkenke dị elu na nke siri ike. Mgbe ukpụhọde, enweghị nkenke dị iche na-apụta, a na-echekwa nkenke nke ọma ma na-eguzogide ikike ibu ibu siri ike, na-eme ka ihe ngosi slide na-arụ ọrụ, na slide ahụ nwere ike iguzogide nnukwu ibu eccentric yana slide ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị nkata. The ndu okporo ígwè n'akụkụ slide mere site ọla kọpa-isi alloy, ịmụta ụta-udi mmanụ oghere Ọdịdị iji jide n'aka na ndu okporo ígwè mmanụ dịghị eri eri, dịkwuo mgbochi yi ike nke slide. Na okporo ụzọ ụgbọ mmiri ahụ, enwere oghere pụrụ iche nke na-ejuputa mmanụ maka mmanụ na-ejuputa mmanụ, n'okpuru ebe a nwere igbe nkwụghachi mmanụ iji zere mmanụ mmanụ n'ala.
System A na-etinye usoro nchịkwa nke hydraulic n'akụkụ akụrụngwa, ebe e mere maka ikpo okwu, nwere ọdịdị dị mma ma dị mfe ilekọta. Thelọ ọrụ hydraulic gụnyere mmanụ mmanụ, usoro nchịkwa isi hydraulic, ebe a na-agbapụta mgbapụta, nlele nrụgide, nje na ngwa ndị ọzọ. Ejikọtara ha na usoro njikwa hydraulic dum site na pipeline.
A-● The haịdrọlik usoro a tumadi ji proportional na servo nso-akaghị akara, sọrọ support nchedo akara, wdg
● Mmanụ tank e setịpụrụ amanye jụrụ nzacha usoro (ulo oru efere-ụdị mmiri jụrụ ngwaọrụ, jụrụ site ekesa mmiri, mmanụ okpomọkụ≤55℃，ijide n'aka na igwe nwere ike ịpịgide aka na awa 24.) iji hụ na achịkwa ọnọdụ okpomọkụ mmanụ na oke enyere. Warningdị ịdọ aka ná ntị nke mmanụ: mmanụ ruo 40℃, njikere okpomọkụ na-egosi na touchscreen, amanye jụrụ usoro akpaka na-arụ ọrụ. Mmanụ ruru 55℃, moto mechie, nkwụsị ọrụ, ọnọdụ ọkụ na-egosi na mmetụ ihu.
A-pressure A na-achịkwa nrụgide nke slide site na iji valvụ nrụgide nha na ntuziaka nke a na-achịkwa nke ọma; 2 mode nwere ike gbanwee kpamkpam. (A na-etinye ngwa ngwa na ngwa ngwa maka nrụgide ọrụ nchịkwa na mmụba na-asọba na sistemụ, nke nwere ike imeziwanye njigide njikwa nrụgide.) A na-edozi nrụgide na nhazi usoro nhazi ma gosipụta ozugbo na ihuenyo mmetụ. Ngosipụta ngosipụta nrụgide bụ 0.1Mpa, na nkenke njikwa nrụgide erughị ± 0.3Mpa.
Nhazi usoro Servo
Osote: igwe na-etinye ibo ụzọ
Mebere n'onwe ZHENGXI
Mmanụ tank Mebere n'onwe ZHENGXI
Cartridge Valve China TAIFENG
Sịlịnda Hydraulic Mebere n'onwe ZHENGXI
Mgbapụta China TEKNỤZỤ DỊ ELU
Okpokoro Servo China EGO
Obere Volta Ngwa France AKWECTKWỌ SCHNEIDER
Kọmputa China Inoji
Ihuenyo mmetụ aka China Inoji
Nrụgide Nrụgide China Mgbapu
Akara Japan MBA
Electron Magnetik valvụ China Mgbu
AC Kọntaktị France AKWECTKWỌ SCHNEIDER
Mmiri jụrụ oyi China RUIJIA